Africa | Bhuku Regore ra2014
VANOGARAMO 979 685 702
VAPARIDZI 1 363 384
ZVIDZIDZO ZVEBHAIBHERI 3 265 314
“Iye Zvino Ndagadzirira Kusiya Bhabhironi Guru”
Thomson, mumwe mukomana anogara kuUganda, akanga asvika pakufinhikana nechitendero. Asemburwa nezvinogara zvichitaurwa nevafundisi zvokuti vanhu vabvise mari, akarega kupinda minamato yose yechechi. Asi akaramba achiverenga Bhaibheri rake zuva nezuva. Akanyanya kufarira bhuku raZvakazarurwa ndokuedza kuridudzira, achinyora manotsi mukabhuku. Imwe hama payakasangana naThomson panzvimbo yaaishandira achiita zvokuvaka, yakamuwana achiverenga Bhaibheri rake. Vakatanga kukurukurirana zvinonakidza, uye Thomson akatora bhuku raBhaibheri Rinombodzidzisei Chaizvo? Akariverenga rose muusiku humwe chete. Mangwana acho, hama yacho yakatambira meseji yaiti: “Ndinotenda Ishe nemashoko amakandipa. Iye zvino ndagadzirira kusiya Bhabhironi Guru.” Thomson akakumbira mabhuku ose anotaurwa mumashoko omuzasi uye mumashoko okuwedzera ebhuku racho. Akadzidza Bhaibheri nemwoyo wose, akafambira mberi nokukurumidza, ndokubva abhabhatidzwa paGungano Reruwa ra2012 raiva nemusoro unoti, “Chengetedza Mwoyo Wako!” Muna March 2013, Thomson akatanga kushumira sapiyona wenguva dzose, achibatsira vamwe kuona kuti vanofanira kusiya Bhabhironi Guru.
Hama 8 Dzakadzidza Naye
Jimmy akakurira muPort Louis, guta guru reMauritius. Akatanga kunwa doro aine makore 16 uye pasina nguva akanga ava kudhakwa zuva rega rega. Aiwanzodhakwa zvokusvika pakutadza kuzvidzora, uye akasungwa kanoverengeka. Dzimwe nguva ainwa mabhodhoro anosvika matatu erum, doro rinogadzirwa nenzimbe uye aisvuta midzanga 60 pazuva. Paainge akachoboka, ainwa mushonga unodhaka unoshandiswa pakugeza mahwindo. Ainwa kunyange pefiyumu yaamai vake. Mumwe munhu paakamuudza kuti aiita sechitunha chinofamba, akabva aenda kunzvimbo inorapwa vanhu vanenge vapindwa muropa nezvinodhaka. Akagara ikoko kwegore nehafu, asi hazvina zvazvakanyatsomubatsira.
Rodrigues: Jimmy ainge akatsunga kuchinja mararamiro ake
Jimmy akazosangana neZvapupu zvaJehovha ndokubvuma kudzidza Bhaibheri. Nguva nenguva, aimbobva pachidzidzo chacho kuti ambononwa. Hama dzakadzidza naye dzinosvika 8. Jimmy akazoona kuti aifanira kuchinja mararamiro ake. Akati: “Ndainzwa sokunge kuti bakatwa remudzimu rinotaurwa pana VaHebheru 4:12 rainge richibaya mwoyo wangu. Rimwe zuva pandaiverenga Bhaibheri rangu, ndakaona Zvirevo 24:16, iyo inoti: ‘Munhu akarurama angawa kanomwe, asi achasimuka.’ Ndipo pandakachinja upenyu hwangu.” Pashure pokunge adzidza nehama 7 “achiwa,” Jimmy ainge atsunga kuchinja uye “kusimuka” achibatsirwa nehama yechi8. Jimmy akakumbira Jehovha kuti amupe simba, akapinda misangano yeungano, uye akasiya zvakaipa zvaaiita. Akabhabhatidzwa muna 2003 ndokuva piyona wenguva dzose muna 2012. Iye zvino ava mushumiri anoshumira muungano iri pachitsuwa cheRodrigues.
“Jehovha Nengirozi Vachava Shamwari Dzangu”
Mary wekuKenya ane makore 70 ainge ari nhengo yeChechi yePresbyterian kweupenyu hwake hwose. Aigara achibatsira chechi yacho kuti iwane mari uye akatobatsira kuvaka imwe chechi kwaaigara. Mumwe wevanakomana vake paakava Chapupu, Mary haana kufara nazvo. Mwanakomana wacho aimukoka kumisangano yeungano, asi Mary airamba kuenda, achiti aida kunzwa shoko reBhaibheri mumutauro wake, wechiKikuyu, kwete muchiSwahili. Pakupedzisira, Mary akabvuma kupinda gungano reruwa raizoitwa mumutauro wechiKikuyu. Akagara panzvimbo yevakwegura pagungano racho. Akafadzwa zvikuru nokuratidzwa kwaakaitwa mutsa nerudo. Mary akati akanga asina kumboona rudo rwakadaro muchechi make. Akanyatsoteerera hurukuro dzose uye akafarira zvaakanzwa. Paakaudzwa nezvokudzidza Bhaibheri pachishandiswa bhurocha raTeerera Mwari, akabva angobvuma.
Pashure pokunge adzidza kwemwedzi mishomanana, Mary akasarudza kuti aida kuva mumwe weZvapupu zvaJehovha, saka akaoneka kuchechi kwake. Vatungamiriri vechechi vakagumbuka zvikuru. Vakashevedza mufundisi kubva kuguta guru reNairobi, kuti auye kuzotaura naye. Mufundisi wacho akaedza kunyengetedza Mary kuti arege kusiya chechi, asi akatsika madziro. Mufundisi wacho akabvunza kuti, “Ndivanaani vachava shamwari dzenyu kana masiya chechi? Mune shamwari dzakawanda nevavakidzani vari muchechi.”
Mary akapindura kuti, “Jehovha nengirozi vachava shamwari dzangu. Uye Zvapupu zvichavawo shamwari dzangu.”
Akundikana kunyengetedza Mary, mufundisi wacho akaenda. Mary ari kuramba achifambira mberi zvakanaka pakudzidza kwaari kuita Bhaibheri uye ari kupinda misangano yose yechiKristu, kunyange zvazvo achigara kure nekwainopindirwa. Munguva pfupi yadarika, paainge asingakwanisi kushandisa zvifambiso zvinotakura vanhu kuti aende kumisangano, akaenda achifamba netsoka kwemaawa maviri kuchinaya. Pasinei nokushorwa nevavakidzani, Mary akatsunga kuzadzisa chinangwa chake chokuti abhabhatidzwe.
Liberia: Kugadzirira zvigaro zvepaChirangaridzo. Muna 2013, vaparidzi vaiva 6 148 asi vanhu vakapinda vaiva 81 762
Mumwe musikana anonzi Ashton ane makore 14 anogara kuCameroon. Paakatanga kudzidza Bhaibheri neZvapupu zvaJehovha, akapikiswa zvikuru nababamukuru naamaiguru vake vaanogara navo. Vaiomerera pakuti aende navo kuchechi yemweya. Pane imwe nguva vachiita munamato, mufundisi akaisa maoko pamisoro yevaivapo, achivapa mweya, zvichiita kuti vadonhere pasi. Ashton haana kudonha. Mufundisi akanyengetera anyengeterazve, asi Ashton akaramba akamira. Saka mufundisi wacho akamupingirisha kuti adonhe! Paakadzokera kumba, Ashton akaudza amaiguru nababamukuru vake kuti akanga apingirishwa, asi havana kuzvibvuma. Akabva angosarudza ipapo kuti aisazombofa akaendazve kuchechi. Mazuva ano, pasinei nekupikiswa uye kunyombwa kwaanoitwa nevemumhuri nevavakidzani, Ashton anoramba achipinda misangano paImba yoUmambo.
Kunyange zvazvo Anilpa aingova negore rimwe chete nemwedzi mishanu, akashingaira pakuita mushandirapamwe wokukoka vamwe kuti vapinde gungano reruwa regore rapera kuAngola. Basa raAnilpa raiva rokugogodza pamadhoo omirira kutambidza vanasaimba mapepa okukoka uku amai vacho vachitsanangura muchidimbu zvavainge vafambira. Anilpa aiva nemanyukunyuku zvokuti pamwe pacho aiti amai vake vasati vapedza kukurukura iye ainge ava kutogogodza padhoo raitevera. Vanasaimba vakawanda vakafadzwa chaizvo nezvaaiita. Somuenzaniso, pazuva rokupedzisira regungano racho, mumwe mukadzi akauya kuna Anilpa ndokuti: “Ndanga ndichikutsvaka. Ndafara zvikuru kuti ndakuwana, sezvo uri iwe wakandikoka kuti ndipinde gungano rino.”
Vainge Vaneta Nokudzvinyirirwa
Muna August 2012, vaparidzi veungano yeAntaviranambo kuMadagascar vakaona boka revanhu vaiti vaida kuva Zvapupu zvaJehovha. Vanhu vacho vaiona kuti vaidzvinyirirwa nevatungamiriri vavo vemachechi, avo vaiita zvakasiyana nezvavaidzidzisa. Vakati machechi avo aisava neurongwa hwekuvadzidzisa nezveBhaibheri uye aisava nemabhuku anotsanangura zvavaitenda. Mari yaibhadhariswa mumachechi yainge yakawandisa, vanamati vacho vaisava neukama hwechokwadi, uye vanhu vacho vaisamboratidzana rudo rwechokwadi rwechiKristu. Vakatiwo vaiziva kuti Zvapupu zvaJehovha zvakanga zvisingasangani nematambudziko iwayo.
Pave paya, boka racho rakazonyorera hofisi yebazi. Tsamba yacho yaiti: “Tiri kunyora tichikuzivisai nezvechido chedu chokushumira Jehovha. Asi tinogara kure. Vamwe vedu vanoda maawa 9 kusvika ku15 kuti vafambe kuenda kumisangano. Saka tapota tinokukumbirai kuti mutumire mumwe munhu azotibatsira kudzidza Bhaibheri. Hatigoni kuzadzisa chido chedu chokushumira Jehovha nemwoyo wedu wose kutoti matibatsira kusimbisa kuda kwatinomuita. Tiri 215 uye tinobva munharaunda dzemasabhuku matatu. Tiri vemachechi akasiyana, asi iye zvino tose tinoda chaizvo kushumira Jehovha uye kumuteerera nemwoyo wedu wose. Tinovimba kuti muchatibatsira.”
Hama dzakaenda kunoona boka iri, dzichifamba kwemaawa 9 kuti dzisvike mubhuku rokutanga. Ikoko hama dzakaita musangano, uye wakapindwa nevanhu 65 vaifarira. Shoko racho rakakurumidza kufamba, uye vanhu vaibva kune mamwe mabhuku vakaratidza kuti vaiva nechido chokushanyirwa uye kudzidziswa Bhaibheri. Saka hama dzakafamba mamwezve maawa mana kuenda kune rimwe bhuku ndokuita musangano wakapindwa nevanhu vanodarika 80. Ikoko dzakasangana nevamwe vakadzikumbira kuti dziuye kubhuku ravo, daro raifambwa kwemaawa maviri. Hama dzacho dzakabvuma uye dzakabva dzaitawo musangano ikoko. Wakapindwa nevanhu vanodarika 50.
Kaviri, vanodarika 30 pavanhu ava vakauya kugungano kuMahanoro, vachifamba kwezuva rimwe chete nehafu. Pavanhu vacho, 25 vavo, vaisanganisira vakaroorana, vabereki nevana vavo, uye vakwegura vakauya pakashanya mutariri wedunhu. Vose vakagara muimba imwe chete, vachikurukura zvavainge vadzidza uye kubvunza mibvunzo kusvikira pakati pousiku. Vanhu vacho vakati vamwe vakawanda vaida kubatana neZvapupu pakunamata kwazvinoita nokuti vanhu vainge vaneta nokudzvinyirirwa nevatungamiriri vavo vezvitendero.